Faahfaahintii Sacuudiga ee dilkii Jamal Khashoggi oo la qaadan la'yahay - BBC News Somali
Image caption Jamal Khashoggi.
Sacuudi Carabiya ayaa waxaa soo foodsaaray culays ku aaddan in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso geeridii qoraagii dalkaas u dhashay Jamal Khashoggi.
Wasiirka Britain u qaabilsan ka bixitaanka Midowga Yurub ayaa ah masuulkii ugu dambeeyey ee ku baaqa in faahfaahinta ah in Mr Khashoggi uu ku dhintay dagaal gacanta ah oo ka dhex dhacay qunsulliyadda ay tahay "mid aan la rumaysan Karin".
Madaxweynaha Maraynkanka Donald Trump ayaa sheegay in "aanu ku qancin", asagoo ku biiray baaqa Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay oo dalbanaya faahfaahin dheeri ah.
Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in saxafigaas oo dhaliili jiray xukuumadda Sucuudiga la dilay isla markaasna xubnihiisii la googooyay.
Mr Khashoggi ayaa galay qunsulliyadda 2-dii October si uu uga soo qaato warqado furriin.
Sacuudi Carabiya ayaa markii hore sheegtay in saxafigaasi uu qunsuliyadda ka baxay asagoo nabdoon balse haatan qiratay in uu ku dhintay gudaha qunsuliyadda.
Sidee dunidu uga falcelisay qirashada Sacuudiga?
Wasiirka Britain u qaabilsan ka bixitaanka Midowga Yurub Dominic Raab ayaa faahfaahinta Sacuudigu bixiyey kaga jawaabay: " U malayn mayo in la rumaysan karo. Waxaanu taageeraynaa baadhitaanka uu Turkigu wado xukuumadda Britain-na waxay doonaysaa in lala xisaabtamo ciddii dilka ka dambaysay"
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu soo dhaweeyey mawqifkii Mr Trump ee ahaa in tallaabo laga qaado Sacuudi Carabiya.
Mr Raab ayaa yiri: " ma doonayno in aan gacmaheenna cirka utuurno oo aan joojinno xiriirka aan laleenahay Sacuudi Carabiya, ma ahan oo kaliya shaqooyinka faraha badan ee Birtain oo ku xiran Sacuudiga balse sidoo kale waa inaad culays ku saari kartaa bah wadaagtaada aad u baahan tahay sidii aad ula hadli lahayd"
Sabtidii, Mr Trump ayaa yidhi: "Ma qanacsani ilaa aan jawaabta ka helayno."
Balse madaxweynaha Maraykanka ayaa yiri, inkastoo cunaqabatayn lagu soo rogo Sacuudiga ay suurto gal tahay, haddana hakinta heshiiska hubka "Annaga ayay wax na yeelaysaa in kabadan inta ay ayaga waxyeelayso"
Wasiirka Maaliyadda Maraykanka Steven Mnuchin ayaa Axadda maanta ah ku celiyey, asagoo sheegay in arrinta cunaqatayntu ay tahay "Mid aan wali la gaarin"
Wasiirka Arrimaha Dibadda Canada Chrystia Freeland ayaa tiri " faahfaahinta uu Sacuudigu soo gudbiyay maahan mid la qaadan karo oo la rumaysan karo"
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa codsatay daahfurnaan, wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa soo jeediyey su'aalo aan cidina ka jawaabin ayadoo Ra'isul Wasaaraha Australia-na uu yiri "Maahan waxaas wax la qaadan karo, wax dhici karana maahan"
Diblumaasiga Midowga Yurub Federica Mogherini iyo Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa labaduba sheegay in lala xisaabtami doono ciddii falkaas masuulka ka ahayd.
Ururka Xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa faahfaahinta Sacuudiga ku tilmaamay marin habaabin iyo " Shirqool foolxun"
Wargayska The Washington Post, oo daabici jiray qoraallada Mr Khashoggi, ayaa sheegay in xukuumadda Sacuudigu ay " Si ceeb ah ugu celcelinayso been ay been kale kasii dambayso"
Kuwait ayaa ah dalkii ugu dambeeyey ee ammaanay sida Boqor Salmaan uu uga jawaabay kiiska, ayadoo sheegtay in taasi ay muujinayso " Dadaalka Boqortooyada iyo ka go'naanshaha in ay runta sheegto iyo tixgalinteeda sharciga oo ay doonayso in ay la xisaabtanto kuwii ka dambeeyey dhacdadan murugada leh"
Ilaa iyo hadda Sacuudi Carabiya waxay sheegtay in ay xabsiga dhigtay 18 qof, ayna shaqadii ka eriday laba nin oo gacan yare u ahaa Dhaxal Sugaha dalkaas Mohammed bin Salman, ayna isbaddal ku samaysay hay'adda sirdoonka.
Balse hadalka ah in saxafigii Jamal Khashoggi uu ku dhintay "dagaal gacanta ah" ayaa reebay su'aalo aan jawaab loo hayn.
Turkigu wuxuu yara joojiyey eedayntii tooska ahayd ee uu Sacuudiga ku eedaynayey dilka, balse baarayaasha kiiska ayaa sheegay in ay hayaan caddaymo isugu jira cod iyo muqaal muujinaya in Mr Khashoggi ayqunsuliyadda ku dhex dileen koox katirsan sirdoonka Sacuudiga.
Image caption Baarayaasha oo maydkii ka raadinaya kaynta Belgrad
Su'aasha ugu wayn ee Mr Khashoggi saaxiibadiis iswaydiinayaan ayaa ah, meeyey maydkiisii?
Hadalka Sacuudiga ayaa is badbaddalay dhowr jeer, markii hore wuxuu sheegay in Mr Khashoggi uu ku dhintay ciijin kadib markii uu iska caabiyey iskuday lagu doonayey in dalkiisii Sacuudi carabiya lagu celiyo. Wuxuu kaloo sheegay in maydkiisii roog lagu duubay oo loo dhiibay caawiye dalka Turkiga u dhashay, si uu usoo aaso.
Kadib waxaa soo soo baxday warar sheegaya in qof dharkii Mr Khashoggi xirtay oo asaga isu ekaysiiyey uu qunsuliyadda ka baxay.
Masuul sacuudi ah ayaa sheegay in hadallada sacuudigu ay isu baddaleen sababo la xiriira " Xog been ah oo xilligaas kasoo gaartay gudaha"